Adeegga online lacag la'aan ah. dabaq Is-Nigeria
Xisaabinta qalabka dabaqa is-dheellitir
Miisaanka sawir 1: 0.5 1 1.5 2 3 4 5 6 7 8 9 10
meel width X
dhererka qolka Y
oo dhumucdiisuna waxay ugu yaraan F
Xisaabinta dabaqa is-Nigeria
X - meel width
Y - dhererka qolka
In uu cabbirka of farqiga height at afarta gees oo qolka, at dhibcood A, B, C, D.
Si arrintan loo sameeyo, waxay isticmaalaan heerka dhismaha.
Calan dhumucda yar ee dabaqa is-Nigeria ah. size Tani waxaa si toos ah u isticmaali doonaa in ay dhibic ugu hooseeya ee qolka.
Sidaas darteed, tirada alaabta loo baahan yahay in mitir cubic oo dhigay height ee labada geesood oo qolka la xisaabin doonaa.
Barnaamijka arko xaddiga alaabada u dabaqa is-Nigeria ku salaysan farqiga height at geesood ah.
awoodaan in ay si sax ah loo xisaabiyo kharashka qalabka Waxaad noqon doontaa.
Faa'iidada ugu weyn ee dabaqa is-Nigeria screed in gaar ah, taas oo uu isticmaalaa in la abuuro dusha a flat iyo siman iyada oo aan wax dadaal ah oo dheeraad ah oo ku saabsan qayb ka mid. Taasi waa sababta dabaq sida maanta ayaa helay taageero gaar ah.
Deeqa tumo waxaa madax bannaan noqon kartaa. All in loo baahan yahay in la ogaado oo dhererkeeda iyo width of qolka, sarajooggiisuna ee rukummada ku, iyo sidoo kale dhumucda yar ee lakabka dheregtaan, ka dibna barnaamijka awoodo inuu xisaabiyo mugga mid ah waxyaabaha aad u buuxisid view inclines noqon doonaa.
Faa'iidooyinka dabaq daadadku
1. Oogada ee ragga iyo dumarka simanyihiin, aan dun ama dhimman.
2. Nolosha dhaw ee dabaqyada is-Nigeria timaado 40-50 sano.
3. Assal ahaan.
4. Waxay uma baahna daryeel gaar ah.
dabaqa filler dhoobo waa wax fudud, sidaa darteed dad badan oo door bidaan in waxa aad naftaada u samayn iyagoon maciinsan wax ku takhasusay. Laakiin halkan waxaa jira subtleties qaar ka mid ah.
Sidaas, ka hor inta aanad bilaabin saareen dabaqa aad u baahan tahay si ay u diyaariyaan qolka. Si arrintan loo sameeyo, ka saar hore Gogosha, looxaanta iyo albaabka. sagxada dhulka waxaa barbareeyay. Taas waxaa la samayn karaa iyadoo la isticmaalayo mashiinka sulubid gaar ah ama buraash silig a. Markaas, haddii ay jiraan dildilaaca dabaqa, waxay muujinbee isticmaalaya xoqo saddex-geesood ah.
Xusuusnow in haddii aad u jiifay filler ah on top of dabaqa alwaax, waa in la xoojiyaa oo la a pre-Roobka gaar ah.
Intaas ka dib, iyadoo la isticmaalayo xagal dhul- dabaqa ah usii la qiyaasay. Sida laga soo xigtay kuwaas oo cabbirka on derbiyada sameeyey sumadda, kaas oo sarajooggeeduna wuxuu of dabaqa daadan doonaa. At this height, oo lagu daray 2.5 sentimitir, derbiyada waa la nadiifinayaa ka qotontay iyo qalabka kale ee dhameystir.
Haddaba mar labaad, dabaqa la nadiifin iyo degreased la budo gaar ah.
Haddaba dabaqa waafaqsan xal lahu dildilaaca iyo meelaha dillaacsan, smoothes isdaba marin. Ka dib markii in, dabaqa waa in lagu badali doono. Oo marxaladan diyaarinta la dhamaystiro. Waxaad bilaabi kartaa saareen dabaqa.
Markaasaa Ananiyas tegey filler dabaqa
Si aad ku shub dhulka ku siman qaadan Kaaliyaha kuwa qas doonaa xalka ilaa aadan buuxin.
Diyaari xal sida ay tilmaamaha xirmo. Si xal ahaa uniform, ma buuxin taangiga isla markiiba biyaha oo dhan. Tanu waa qayb weyn oo ka mid ah. Waxaa cajiin xal. Si arrintan loo sameeyo waxaa fiican in la isticmaalo layliga koronto la biiyaha gaar ah. Markaasaa kaliya marka xalka galay tiro a dhqaalaha soo jeesan doonaa, ku shub biyo haray waa in.
Sex loo daadshay jihada of albaabka, ka xagal ka soo horjeeda ka galo in dhismaha. Isku dar ah ayaa lagu soo shubay in qaybo, mid kasta kadib markii dusha sare la duubin maciishaduna. Tani waxay ka caawisaa in ay ka saarto goobooyin hawo ah in ay galeen yaabaa in xalka iyo siin daahan direyska.
Shubayso ka mid in muddo kale oo waqti waa in aanay noqon in ka badan 10 daqiiqo.
Intii lagu qalajiyo dabaqa, waana 3-6 saacadood ku xiran brand ee xal iyo fogaado Istimaalka ee isbedel heerkulka qolka.